‘बाहिरी संसारलाई नेपाली साहित्य कति सम्पन्न छ भन्ने थाहा छैन’: लेखक डा. संगीता स्वेच्छासँगकाे अन्तर्वार्ता · Global Voices नेपालीमा
अनुवादले विश्व परिवेशमा नेपाली साहित्यकाे ढाेका खाेल्न मद्दत गर्नेछ ।
अनुवाद पोष्ट गरिएको 26 मार्च 2020 13:59 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् عربي, Español, Italiano, čeština , Français, Română , 繁體中文, Ελληνικά, বাংলা, Malagasy, русский, English
उनले १८ वर्षकै उमेरमा लेखेकी पहिलाे उपन्यास ‘पखालिएकाे सिउँदाे’ ले साहित्यिक वृत्तमा उत्कृष्ट समिक्षा हासिल गरेकाे थियाे । यो उपन्यास नेपाली महिला पात्र सन्ध्याकाे भावनात्मक यात्रामा केन्द्रित छ । यसमा उनले विगतमा भाेगेका दुःख, पीडा र आफ्ना विगतबाट पार पाउन उनले गरेकाे संघर्षकाे कथा रहेको छ। यसले नेपालमा हुने गरेका मानव बेचबिखनका मुद्दाहरूलाई समेत समेटेकाे छ । ग्लाेबल भ्वाइसेजले उनीसँग उनका कार्य तथा साहित्यिक प्रेरणाका बारेमा कुराकानी गरेकाे छ ।
यसका साथै, आजकाे विश्वव्यापी संसारमा नेपाली लेखकहरू विश्वभरी नै छरिएर रहेका छन् । संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर रहेका लेखकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) काे स्थापना भएकाे हाे । अनेसासकाे विश्वका ८० देशहरूमा शाखा छन् । १२ विभिन्न देशहरूमा रहेका १०० नेपाली लेखकहरूलाई एकै स्थानमा भेला गराई नेपाली साहित्यकाे संवृद्धिका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै प्रवासी नेपाली लेखकहरू तथा नेपालमा बस्ने लेखकहरूलाई हाैसला प्रदान गर्न हालै लण्डनमा भएकाे अनेसासकाे सम्मलेन यसकाे एक उदाहरण हाे । उक्त सम्मेलनमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएका लघु कथाहरूकाे सङ्ग्रह ‘सिल्भर क्यास्केड’ काे पनि विमाेचन भएकाे थियाे । नेपालकाे बुक हिल नामक प्रकाशन गृहले प्रकाशन गरेकाे याे कथा सङ्ग्रहमा चलेका लेखकहरूका कथाहरू सङ्ग्रहित छन् । हामी आशावादी छाैं कि, अनुवाद भएका नेपाली साहित्यिक कृतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका पाठकहरूकाे ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै उनीहरूका माया पाउने छन् । हामी यस्ता धेरै कृतिहरू प्रकाशित हाेउन् भन्ने चाहन्छाैं । यसै गरी, मेराे कथा सङ्ग्रह ‘गुलाफसँगकाे प्रेम’ पनि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद हुने तयारीमा छ ।
डा. संगीता स्वेच्छासँगकाे याे अन्तर्वार्ता इमेलमार्फत् गरिएकाे हाे ।